गोलिचिन्हहरू थप गरिँदै
गोलिचिन्हहरू थप गर्दा
अनुच्छेद(हरू) चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ गोलिचिन्हहरूमा थप गर्न चाहनुहुन्छ.
ढाँचा पट्टीमा, गोलीचिन्ह खुल्ला/बन्द प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्।
गोलिचिन्हहरू हटाउन, गोलिचिन्ह अनुच्छेदहरू चयन गर्नुहोस्, र ढाँचा गरिएको पट्टीमागोलिचिन्हहरू सुरु/बन्दप्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् .
गोलिचिन्हहरू ढाँचा गर्दा
गोलिचिन्ह सूचीहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्न, ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कनरोज्नुहोस्।
उदाहरणका लागि, गोलिचिन्ह प्रतीक परिवर्तन गर्नका लागि,विकल्पट्याब दबाउनुहोस्, क्यारेक्टर पछिकोचयनबटन दबाउनुहोस्, र स्पेशल क्यारेक्टर चयन गर्नुहोस्. तपाईँ छवि(image) ट्याब दबाउन पनि सक्नुहुन्छ, र चयनक्षेत्रमा प्रतीक शैली क्लिक गर्नुहोस्l
क्रमाङ्कन र क्रमाङ्कन शैलीहरू
क्रमाङ्कन थप गर्दा
अलग अलग अनुच्छेदहरूका लागि गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन बन्द गर्दा
सङ्ख्या दिइएको सूचीहरू समिश्रण गर्दा
सङ्ख्या दायराहरू परिभाषित गर्दा
क्रमाङ्कित सूचीमा क्रमाङ्कन परिमार्जन
Title is: गोलिचिन्हहरू थप गरिँदै